လှေကား သုံးထစ် | မေတ္တာရိပ်
မဂ်တားဖိုလ်တား အန္တရာယ်များ →
လှေကား သုံးထစ်	Posted on November 2, 2009	by mettayate ခန္ဓ၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် ၀က္ကလိသုတ် ၌ ဗုဒ္ဓက –
ယောခေါ ၀က္ကလိဓမ္မံ နပဿတိ
အဓိပ္ပါယ်ကား ၀က္ကလခန္ဓာ နာမ်ရုပ်တရားကို မမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မမြင် ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေသူဖြစ်သော်လည်း ရုပ်နာမ်တရားအဖြစ်အပျက်ကို မမြင်သဖြင့် အကြားဖြင့် ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်သော သုတသရဏဂုံ ဟု သာ ခေါ်၏။ (ရတနာသုံးပါးကို တကယ်မြင်သည်ဟု မဆိုရ။)
ဒိဋ္ဌိ ၀ိစိကိစ္ဆာ ကွာကြောင်း ၀ိပဿာနာဘာဝနာတရားကို ရှုပွားနိုင်ပြီဆိုမှသာ ရတနာသုံးပါးကို တကယ်မြင်ပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သော ဒိဋ္ဌိသရဏဂုံ ဟု ခေါ်ရ၏။
“သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ခေါ် ငါရှိသည်ယူသော အယူစွဲကို ပယ်သတ်ရန် အတွက် လှေကား ၃ထစ်”
၁) ဉာတပရိညာ – လောကမှာ တကယ်ရှိတဲ့ ပရမတ်တရားနဲ့ တကယ်မရှိတဲ့ ပညတ်တရားများကို ပြတ်ပြတ်သားသားသိသွားအောင် ဆရာဆီမှာ နာယူမှတ်သားရမယ်။
၂) တီရဏပရိညာ – ပရမတ်တရား ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးဟာ နားချိန်အားချိန်မရှိဘဲ တရစပ်ဖြစ်ပျက်နေတာပါလားဆိုတာ သိပြီးသွားတာနဲ့ အချိန်ရသမျှ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ကို ဆင်ခြင်ပွားများနေတာ။ (စီးပွားရှာရင်း၊ အိမ်အလုပ်လုပ်ရင်း စသည်ဖြင့် နေ့စဉ်ဓူဝတွင် ရှုပွားနိုင်ပါသည်။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် နိမိတ်ရအောင် စိတ်ငြိမ်ရာသို့ထွက်၍ အပြင်းအထန်အားထုတ်နိုင်မှသာ ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓလက်ထက်တွင် ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းပေါက်ရောက်၍ သောတာပန်အရိယာဖြစ်ကြသူကား အလွန်များ၏။
၃) ပဟာနပရိညာ – ရှုမှတ်ပွားများပါများလို့ ရင့်ကျက်ချိန်ရောက်တာနဲ့ ဆိုင်ရာ မဂ်ကျလာပြီး ဆိုင်ရာကိလေသာကို ပယ်သတ်ပစ်လိုက်တာ။
ဉာတပရိညာ ကို တက်ကြတော့မယ်ဆိုရင် နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ် နှင့် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ် ကို ရအောင်လုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ် – ပညတ်ကင်းပြီး နာမ်တရား ရုပ်တရားအပေါ်မှာ ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတာကို ခေါ်ပါတယ်။
ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ် – ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို သိမ်းဆည်းပြီးသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကို ခေါ်တာပါ။
ဣမိနာပန ဉာဏေန သမ္ပန္နာဂတော
ဗုဒ္ဓသာသနေ လဒ္ဓဿာသော၊ လဒ္ဓပတိဋ္ဌော၊
နိယတဂတိကောစူဠ သောတာပန္နောနာမ ဟောတိ။
စူဠသောတာပန် – ဘုရားသာသနာမှာ အသက်ရူပေါက်ရသူ၊ သံသရာမှာ ထောက်ရာတည်ရာရသူ သုဂတိဘုံကိုသာ ဧကန်မုချရောက်မည့်သူဟု ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်မှာ အမည်ပေးထားပါတယ်။ သောတာပန်အငယ်စားလို့ခေါ်တဲ့ စူဠသောတာပန် အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင် (၃၁)ဘုံမှာ အထက်ဆန်တဲ့ ဥဒ္ဓင်္ဂမခရီးသည် ဖြစ်သွားပါပြီ။ အောက်စုန်ဆင်းတဲ့ အဓေါဂမ ခရီးသည် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သောတာပတ္တိမဂ်ကြီးကို အခုဘ၀မှာဖြစ်စေ၊ နောက်ဘ၀နတ်ပြည်မှာ ဖြစ်စေ ဧကန်မုချရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စူဠသောတာပန်နှင့် မဟာသောတာပန်မှာ ဘယ်အရာက ပိုခက်ခဲတယ်လို့မေးရင် ရုတ်တရက်တော့ မဟာသောတာပန်က ပိုခက်သလိုထင်ရပေမယ့် စူဠသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်နဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသားက ဘယ်ဟာက ဖြစ်ဖို့ပိုခက်တယ်လို့ မေးရင် အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်ဖို့ ပိုခက်ပါတယ။် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှင်ဘုရင် နတ်ရွာစံရင် အိမ်ရှေ့မင်းသားက ရှင်ဘုရင် ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူး။
အညွန်း – အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်- ရွှေပြည်သာ) ရေးသားတော်မူသော လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာ အတွဲ ၁ နှင့် ၂ စာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သားဆိုးနှစ်ယောက်